Kedu ihe bụ akụrụngwa mmanụ ọkụ pellet? Kedu echiche ahịa
Kedu ihe bụ akụrụngwa nke mmanụ pellet? Gịnị bụ echiche ahịa? Ekwenyere m na nke a bụ ihe ọtụtụ ndị ahịa chọrọ ịtọ osisi pellet chọrọ ịma. Taa, ndị na -emepụta igwe pellet osisi Kingoro ga -agwa gị niile. Akụrụngwa nke mmanụ ọkụ pellet: Enwere ọtụtụ akụrụngwa maka pellet ...
Okpokoro ahịhịa mmiri Suzhou “na -atụgharị ihe mkpofu ka ọ bụrụ akụ” na -eme ngwangwa
Okpokoro ahịhịa mmiri Suzhou “na -atụgharị ihe mkpofu ka ọ bụrụ akụ” na -eme ngwangwa Site n'iwebata obodo ukwu na mmụba nke ndị mmadụ, mmụba nke mkpofu na -atụ egwu. Karịsịa mkpofu nnukwu ihe mkpofu aghọọla “ọrịa obi” n'ọtụtụ obodo. ...
Mmezu nke igwe pellet biomass na ibe osisi na ahihia ahihia
Mmeri mmekorita nke igwe pellet biomass na ahihia ahihia ahihia na ahihia N'ime afọ ndị na -adịbeghị anya, mba ahụ akwadola ume mmeghari na iji ọkụ eletrik ugboro ugboro iji gbaa akụ na ụba akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na ọrụ gburugburu ebe obibi ume. Enwere ọtụtụ ihe eji emegharị ihe n'ime ime obodo. Egbugbu wo ...
Nri anụ ụlọ Pellet Mill, Belt akwagharị Hammer Mill, Onye na -akụ osisi, Ogige osisi Chippers, Igwe egweri N'ihi osisi, Pellet igwe na -eri nri anụmanụ,